ရခိုင်ပြန် ကိုဗစ် သံသယလူ တွေ ကို လည်ချောင်းတို့ဖက်“အာခေါင်တို့ဖတ်” ယူ ရတဲ့ ဖိုက်တာ အောင်မျိုး ရဲ့ ကြုံတွေ့ ရတဲ့ တစ်နေ့ တာ – Zartiman
ဆိုတော့ကျ ပြောချင်တာက ဒီက ကိုအောင်မျိုးကို နှယ်နှယ်ရရ မမှတ်ကြပါနဲ့။ တကယ့် ဖိုက်တာကြီးရယ်ပါ။ ဒီနေ့ပဲကြည့်။ ကွာရန်တင်းထဲ မှာ ဖိုက်တယ်။ ကျူးတဲလေးထဲမှာ ဖိုက်တယ်။ စည်ပင်သာယာနဲ့ ဖိုက်တယ်။ ဖိုက် ဖိုက် ဖိုက်။အဲ… အနိုင်အရှုံး စ ကားတော့ မပြောနဲ့ပေါ့။ အဲဒါ အားကစားသမား စိတ်ဓာတ်မရှိရာကျတယ်။ဖိုက်တာမျိုး.. အောင်မျိုး ကို နှယ်နှယ်ရရ မမှတ်ကြ ပါနဲ့။ပြောရရင် မနက် အစောကြီး တိုင်းကျန်းမာရေးရုံး ကို ရောက် နေတာက စရမှာပဲ။ မနေ့ ကတည်းက ရခိုင်ပြန် ကိုဗစ်သံသယလူတွေကို ‘တို့ဖတ်’ ယူဖို့ တာဝန်ပေးခံထား ရလို့ ဒီမနက်တော့ စောစောထ ကားမောင်းခဲ့ကာ၊ တိုင်းရုံးထဲရောက်နေတယ်။
ကိုဗစ်တို့ဖတ်တွေ ထည့်ရတဲ့ တို့ဖတ်ဘူးလေးတွေ ကို ‘ဗီတီအမ်’ လို့ခေါ်တယ်။ viral transport media ပေါ့။ နှာခေါင်းထဲ အာခေါင်ထဲ ဂွမ်းတံလေးတွေနဲ့ ထိုးပြီးရင် အဲဒီဘူးလေးထဲ ထည့်ပိတ် ပို့ရတာ။ လက်သူကြွယ်လောက် ရှိမယ့် ပလတ်စတစ်ဘူး အရှည်လေးတွေ။ နောက်တစ်ခုက ဗက်ဆင်း ကယ်ရီယာ ခေါ်တဲ့ဟာ။ ဗမာလို ရေခဲပုံး ဆိုပါစို့။ သို့ပေမယ့် သူက အပိတ်အဖွင့်မှာ ကလစ်လေး တွေ ပါတယ်။ အဖုံးကို သိုင်းကြိုးနဲ့ ဘာနဲ့ သေချာ အကျအန ပိတ်ထားရင် တော်ရုံအကျင့်မရှိတဲ့လူ ဗြုန်းခနဲ့ မဖွင့်တတ်ဘူး။ ပြီးတော့ သူ့ကို ကြည့်လိုက် ရင် ရေခဲပုံးဆိုတာထက် သေတ္တာနဲ့ ပိုတူတယ်။
အထဲမှာ ရေခဲခြောက်ခေါ်တဲ့ ပလတ်စတစ်ဘူးနဲ့ အအေးခံ ထားတဲ့ ရေခဲတောင့် လေးတွေ ပါပါတယ်။ကျွန်တော်တိုင်း ရုံးကို အစောကြီး ရောက်နေတာက တို့ဖတ်ယူဖို့အတွက် အဲဒီ ပစ္စည်းတွေ လာထုတ်တာ။ နောက်လည်း ယူရဦးမယ့်အတူတူ ပိုထုတ်ခဲ့မယ် တွေးတာ။ တို့ ဖတ်ဘူးက လိုသလောက်ရပေမယ့် ရေခဲပုံးကတော့ အခုသုံးဖို့ အပြင်၊ နောက်တစ်ပုံးပဲ အပိုရတယ်။ ဒီတော့လည်း နှစ်ပုံးပေါ့။အဲဒါ ရတာ လေးတွေထုတ်၊ ကျွန်တော့် ခွေးဘီလူးကားလေး ပေါ်တင်ပြီး တို့ဖတ်ယူရမယ့် ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံကို မြန်းခဲ့တယ်ပေါ့။ ဒီအထိက ချော နေတာပဲ။ဟိုရောက်တော့ တာဝန်ကျ ဆရာမတွေနဲ့ တို့ဖတ်ယူဖို့ ပြင်ဟယ် ဆင်ဟယ်ပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်ကြပုံက ဒီလို။ တို့ဖတ်ဘူးလေးတွေပေါ် နာမည်၊ အသက် ရေးကပ်ပြီးတော့ တို့ဖတ် အယူခံရမယ့် အဖွဲ့တွေထဲ တစ်ယောက်ချင်း နာမည်ခေါ် ဝေလိုက်တယ်။“ကိုယ့်နာမည်ပါတဲ့ ကိုယ့်ဘူးလေး ကိုယ် ကိုင်ထားပြီး တန်းစီကြပါ၊ ကိုယ့်ဘူး ကိုယ် ကိုင် ထားပါနော်။ အချင်းချင်း ဘူးချင်းမလဲပါနဲ့။ ခြောက်ပေစီ ခွာနေပါ” ဘာညာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလိုတွေ မှာတမ်းခြွေပြီးတော့ကျ ကျွန်တော်က ပီပီ အီးခေါ်တဲ့ အကာအကွယ်ဝတ်စုံ ဝတ်တဲ့ပြီး၊ တစ်ယောက်ချင်းခေါ်ကာ တို့ဖတ်ယူတော့တာပဲ။ကလေးတွေ ဘာတွေ တို့ဖတ်ယူတဲ့ပုံ ဖေ့ ဘုတ်ကကြည့်ပြီး ဒရာမာတွေ ထထချိုးနေတဲ့ လူတွေမြင်ရင် ကျွန်တော်က တအားငိုချင်တာပဲ။
ဘာလို့လဲဆို တကယ့်မြေပြင်မှာ ကလေးနဲ့တွေ့လို့ ဇာတ်နာရတာက တို့ဖတ်ယူတဲ့ ဓာတ်ခွဲမှူးပါခင်ဗျာ။အခုပဲ ကြည့်လေ။ လူလေးငါး ယောက် ယူပြီးတော့ အလှည့်ကျတာ ကလေးလေး။ သုံးနှစ်သားလောက် ရှိမှာပေါ့။ ကျွန်တော့် မြင်ကတည်းက ဒီကောင်က ငိုတာပဲ။ ကျွန် တော်လည်း သနားလို့ တစ်ခွန်းစ နှစ်ခွန်းစ ဝင်ချော့ပါသေးတယ်။ အဲဒါ ကလေးအမေက“ဆရာ့ကို သူက လူလို့ မထင်ပြီး တအားငိုနေတာ ဆရာ။ ဆရာဆီက စကားသံကြားလေ ပိုဆိုးလေပဲ” တဲ့။ ဪ ပီပီအီးဝတ်ထားတဲ့ ငါ့ပုံဟာ သတ္တဝါကြီး တစ်ကောင်လို အင်မတိအင်မတန် ခန့်ညားလို့ ဖြစ်မှာပဲလို့၊ ပီတိမျက်ရည်လေးတွေပါ လဲ့လာမိလိုက်ပါသေးတယ်။
ပြီးတော့ နောက်တစ်ယောက်က ရခိုင်မ။ ၁၆ နှစ်အရွယ် သမီးလေးတစ်ယောက်ရယ်၊ ၈ နှစ်လောက်ဟာလေးရယ်၊ သမီးနှစ်ယောက် ပါ တယ်။ ခပ်ကဲကဲ ကလေးမိခင်တို့ရဲ့ အထာပေါ့ခင်ဗျာ။ သမီးရယ် ဘာရယ် ပြာဆာနေတာပဲ။ ကျွန်တော်က သူတို့ရဲ့ ကြောက်စိတ်ကို နား လည်ပေးပြီး ဖြည်းဖြည်းညင်သာ ယူပေးပါတယ်။ ဒါနဲ့တောင် ၈ နှစ်ကောင်မလေးက ကမ္ဘာပျက် အောင် အော်သဗျ။ အ။ ပီပီအီးထဲက တောင် နားပင်းယူတယ်ဗျာ။သူပြီးတော့ ၁၆ နှစ်သမီး ကောင်မလေး။ ဒါလေးကတော့ ရှက်တတ်တဲ့ အရွယ်မို့ မအော်ဘူး။ သို့သော် မျက် ရည်တောက်တောက်ကျ ရှိုက်ရှိုက်ပြီး ငိုတာဗျာ။ ကျွန်တော့်မှာ သူ့ကို တို့ဖတ်ယူပေးနေရင်းတောင် ရင်ထဲက သနားလာမိပါတယ် ဆို။
အို။ တကယ်တွေ ရင်ထဲ အဲလိုဖြစ်တာပါ ဆိုမှ။ သူတို့အမေကြီး ဆိုတာလည်း သမီးတွေအနားထိလာပြီး တချော့ချော့ပေါ့။ ပြီးတော့ကျ အ မေကြီး အလှည့်။ ဒီမှာ ပြဿနာတက်တာပဲ။ ကျွန်တော်ကလည်း ပထမ ၈ နှစ်သမီးလေးတုန်းက အော်လွန်းပြီး နားငြီးလို့။ ဒုတိယ ၁၆ နှစ် မလေးကျ သနားပြီး ကိုယ်ပါ မျက်ရည်ဝဲလာလို့၊ ခပ်မြန်မြန်ပဲ ယူပေးလိုက်မိတာ။ အဲဒါ သူ့သမီးတွေကို ငိုအောင်လုပ်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို မျက် စောင်းတခဲခဲ ဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်မကြီးကျမှ တို့ဖတ်မယူခင် သူ့လက်ထဲက တို့ဖတ်ဘူး ယူကြည့်လိုက် မိတာ၊ နာမည်က လွဲနေပါရော။ လွဲနေ တာက သူ့သမီးတစ်ယောက်နဲ့ တို့ဖတ်ဘူးချင်း လွဲနေတာ။ ကဲ… မခက်ကြဘူးလား။
ဒါဆို စောစောက ကလေးမနှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ကို သူ့အမေနာမည်ပါတဲ့ ဘူးနဲ့ ယူပေးလိုက်မိတာ။ ဆိုတော့ကာ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်ဘူးနဲ့ ယူပေးလိုက်တာလဲ။ ဒါကိုမေးတော့ သူတို့သားအမိတွေလည်း မမှတ်မိဘူး။ပီပီအီးဆိုတာက ဝတ်ထားရသူအတွက် စက္ကန့်နဲ့အ မျှ ပူတာမျိုးပါ။“ခင်ဗျားတို့ဗျာ။ ဘူးတွေ အချင်းချင်း မလဲပါနဲ့ လို့ ကျွန်တော် အတန်တန် မှာထားလျက်နဲ့…” ဆိုပြီး ပြောတော့ ရခိုင်မက လည်း “အို… ဘယ်သိမလဲ၊ ဒီကလည်း သားအမိချင်းတွေ မှားသွားတာပဲ” ဆိုကာ မကျေမနပ် ပွစိပွစိ။သို့သော် ဓာတ်ခွဲ အဖြေတို့ရဲ့ သဘော က သားအမိချင်းလို့ မရှိပါဘူး။ ဆိုတော့ကာ မင်းတုန်းမင်းကြီးလို “မကျေနပ် တစ်ကပြန်စ” ပဲ။
“ကဲ… အခုယူမယ့် အန်တီ့ဘူးကိုတော့ အန်တီမှန်း သိနေတော့ နာမည် ပြင်ကပ်ပေးလိုက်လို့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အန်တီ့ သမီးနှစ်ယောက် တော့ ဘယ်သူ့ဟာက ဘာမှန်းမသိတော့ နှစ်ယောက်လုံး ပြန်ယူရမှာ” ဆိုတော့၊ဟို ၈ နှစ်သမီးဟာဗျာ၊ အဲဒီစကား ကြားလိုက် ကတည်းက ဗြဲခနဲ့ ဗြဲခနဲ့ အော်ပြီး ငိုတာငိုတာ ဆိုတာ၊ ကွာရန်တင်းစင်တာ တစ်ခုလုံးက ထွက်ကြည့်ကြတယ်။မတတ်နိုင်။တစ်ကပြန်စ။ ပထမ အဆိုပါ အာဗြဲမလေး။ သူ့အမေက ချော့ဟယ်၊ (ကျွန်တော့်ကို စောင်းပြောသလိုလိုမျိုး) ဆဲဟယ် ဆိုဟယ် ခြောက်ဟယ် နဲ့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်သနားတဲ့ ၁၆ နှစ်မလေး။ ခမျာ စောစောကလို ငိုရှာ တာပဲ။ ငိုလည်း တို့ဖတ်တော့ ယူရတယ်။
အာခေါင်က အဆင်ပြေပါတယ်။ နှာခေါင်းမှာ ပထမတစ်ဖက် အပြီး နောက်ဆုံး ဒုတိယတစ်ဖက်မှာ ကလေးမက ငိုနေရင်းမို့ မွှန်လွန်းလာသ လား မသိ၊ ကျွန်တော့်လက်ကို တအား ပုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်တာ ‘ဖြောင်း’ ခနဲ့နေတာပဲ ခင်ဗျာ။ ဒီမှာ လက်ထဲက တို့ဖတ်တံလည်း ဘယ်လွှင့် သွားမှန်းတောင် မသိပါဘူး။ကျွန်တော်က တို့ဖတ်တံ ဘယ်လွင့်သွားမှန်း မသိဘူးလို့ ရေးတယ်နော်။ အို… သူ့အမေကတော့ သိတယ်ဗျ။ ဟိုး အဝေးကြီးက မြေကြီးပေါ် အလျားလိုက်လှဲနေတဲ့ တို့ဖတ်တံလေး ပြေးကောက်တဲ့ပြီး ပေးရှာတယ်။ သို့သော် ဓာတ်ခွဲတို့ရဲ့ သဘောကား ထို့ သို့ မြေကြီးပေါ်ကျပြီးသားကြီး ပို့ပေးလို့မရပြန်။“နောက်ထပ် ထပ်ထိုးရမယ် ခင်ဗျ” ဆိုတော့ကျ။
သူလေးတို့ မေမေမျက်နှာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားသာ ကြည့်ပါတော့ ခင်ဗျာ။အဲဒါမျိုးတွေ လူ ၃၁ ယောက် ယူပြီးပြီဆိုတော့ ကိုအောင်မျိုးကြီး တအားပင်ပန်းတယ်ပေါ့။ တို့ဖတ်ဘူးလေးတွေ စီပြီး ရေခဲပုံးထဲထည့်၊ ပိတ်ပြုပြီးတော့ ပီပီအီးဘာညာ ချွတ်ကာ အေးမြ ခြင်းရဲ့ အရသာကို ကော်ရစ်ဒါတလျောက် လမ်းလျှောက်ရင်း ခံစားတယ်ပေါ့။အောင်မယ်မယ်။ လူနာခန်းတွေရှေ့ ဖြတ်တော့ မှန်ခန်းထဲက နေ စောစောက ဂွမ်းတံနဲ့ သုံးခါအထိုးခံလိုက်ရတဲ့ ၁၆ နှစ်မလေးက သိသိသာသာ မျက်စောင်းထိုးပြတယ်။ သို့သော် သူဟာ နဂါးမလေးဖြစ် ခဲ့ရင်တောင် အဲဒီ ထိုးလိုက်တဲ့ မျက်စောင်းဟာ၊ ဒီက ကိုအောင်မျိုးကြီးရဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အပါအဝင်။
တိုင်းရင်းသား ရခိုင်တွေအပေါ် ထားတဲ့ မေတ္တာအဟုန်ကို ခွင်းပြီး ထွင်းနိုင်လိမ့်မယ် မထင်မိပေါင်။ ဟီဟီ။ အဲဒါ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဗျာ က လေးမက ကိုယ့်ကို မျက်စောင်းလှမ်းအထိုး၊ ကျွန်တော့် ဘယ်ဘက်မျက်စိထဲ ပိုးကောင်လေး ဆတ်ခနဲ့ဝင် ထင်ပါရဲ့၊ ဖျတ်ခနဲ့ မျက်လုံးတစ် ဖတ် မှိတ်လိုက်မိတာကို… ဟို အမေလုပ်တဲ့ ရခိုင်မက မြင်ဖြစ်အောင် မြင်ပြီး ရေခွက်ကို ဆောင့်ချတယ်။ အဲ… ဒါကြီးကတော့ ဘယ်မေတ္တာ အဟုန်နဲ့မှ တားနိုင်မယ်မထင်လို့ မြန်မြန်လေးပဲ လစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ကျွန်တော် အခု ရေးပြတဲ့ ဇီဝိတကွာရန်တင်း စင်တာဟာ ကန်တော် ကြီးမှာပါ။ မန္တလေးမှာ ကိုဗစ်တွေ စစ်တဲ့ဌာနက ၃၅ လမ်းမှာ။
ဒီတော့လည်း ကျွန်တော့်မှာ တို့ဖတ်ဘူးတွေ ထည့်ထားတဲ့ စောစောက ရေခဲပုံးကြီး ခွေးဘီလူးကားလေးနောက်တင်ကာ ကန်တော်ကြီး လမ်းအတိုင်း အရှေ့တက်ခဲ့တယ်ပေါ့။ အဲဒါ မြို့ဟောင်းဈေး လမ်းဆုံအရောက်မှာ ကားတန်းထဲ ပိတ်မိနေပြီး လမ်းနည်းနည်းကြပ်လို့ မှေး မောင်းရတယ် မို့လား။ အဲလို နေတုန်း စိတ်ကူးယဉ်တာပေါ့။တကယ်ဆို ငါ သူတို့လေးတွေကို ဒီ့ထက်ချိုချိုသာသာ ဆက်ဆံခဲ့သင့်တာ” ဘာ ညာ ပေါ့ဗျာ။ အတွေးတွေ ပွားနေတာ။ “တကယ်လို့ အစိုးရကသာ မပူတဲ့ ပီပီအီးတွေ တီထွင်ပေးမယ်ဆို ငါဒီထက် ချိုချိုသာသာ ပြောဆို နိုင်မှာပဲ” အစိုးရကိုလည်း နာနာဆဲပေါ့။ ဟီးဟီး။ အဲလိုတွေ တွေးနေတုန်း ကားနောက်ခန်းဆီက ညိမ့်ခနဲ့ တစ်ချက်ခံစားလိုက်ရပြီး။
ဘေးကနေ တစ်ယောက်ယောက်က လှမ်းအော်တာ“ယူသွားပြီ၊ ယူသွားပြီ၊ ခင်ဗျား ဟာကြီး ယူသွားပြီ” တဲ့။ဟ… သောက်လခွေး။ ခွေးဘီ လူး ကားနောက်ခန်းမှာ တင်ထား တဲ့ ကိုဗစ်ရေခဲပုံးကြီး လူယူပြေးတာဗျား။ အား။ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ ကျွန်တော်လည်း ကားပေါ်က ဆင်းပြီး ဒုန်းစိုင်းလိုက်တော့တာပေါ့။စိတ်ဟာ လက်ဖျစ်တတွတ်အတွင်း ကုဋေဘယ်နှသန်းဆိုလား ဖြစ်တယ်ဆိုရဲ့။ ဒီ ရေခဲပုံးကြီး ပြန်မ ရရင် ၃၁ ယောက်လုံး အသစ် ပြန်ယူရမှာ။ စောစောကမှ တို့ဖတ်အယူခံထားရတဲ့ လူအုပ်ကြီးဟာ နောက်တစ်ခါသာဆို…. အို… ငါတော့ သေပြီ။ တခြားလူတွေအသာထား ဟို ရခိုင်မ လုပ်တာနဲ့ ပဲ ငါသေမှာ။
ငါမသေချင်သေး။ တော်ကြာ … ရခိုင်မလေးငို…. အဲ …ဟုတ်ပေါင်။ လိုက်ဟ အောင်မျိုးရ။ မင်း ပြဿနာ မတက်ချင်ရင် အဲဒီ ရဲခဲပုံးကြီး မရ ရအောင် လိုက်ယူဟ ပေါ့ဗျာ။ယူပြေးတာကလည်း ကလေးသာသာ ကောင်လေးဗျ။ မအေပေးလေးက ကိုဗစ်ပုံးကို ဘာထင်နေတယ် မသိ။ ကလေးသာဆိုတယ် အပြေးက ချန်ပီယံလားမသိ။ သင်းကိုတော်တော်နဲ့ မမိ။ အကြိုအကြားတွေ အကုန်လျှောက်ပြေးပြီးတဲ့ အဆုံးကျမှ အိမ်လေးတစ်လုံးထဲ ဝင်သွားတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ဟောဟဲခတ်နေပြီ။“စောစောက ကလေးယူပြေးသွားတဲ့ ပုံးလေး ကျွန်တော်ပြန်လိုချင် လို့ပါ”အိမ်ရှေ့ကပြင်မှာ ထဘီရင်ရှားနဲ့ မိန်းမ၊ ဘာတွေလည်း မသိ၊ ကုန်းလုပ်နေရာက မလှုပ်ပါ။
တော်တော် ကြာကြာ ဇွဲခတ်မေးတော့မှ..“ဘယ်က ကလေးလဲ။ ဒီအိမ်မှာ ဘာကလေးမှ မရှိဘူး” တဲ့။ အထဲက အသက် ၅၀ လောက် လူကြီး တစ်ယောက် ထွက်လာပြီး ဗြောင်လိမ်တာ။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ခေတ်က နွားခိုးတဲ့ ရွာတစ်ရွာ ရှိဆိုလား။ အဲဒီရွာက နွားခိုးပြီး တစ်ရွာလုံး မျှ စားကြတာတဲ့။ ဒါပေတဲ့ ရွာထဲက ကြိုက်တဲ့ ကလေး တစ်ယောက်ယောက် ကို “မင်းတို့အိမ် ဘာချက်လဲ” မေး၊ “ဂဂျွန်းရွက်ကြော်” လို့ချည်း ဖြေတာဆိုပဲ။ အခုလည်း ဒီလူတွေက အဲဒီ “ဂဂျွန်းရွက်ကြော်” ဆိုတဲ့ အကွက်တွေ။ကျွန်တော်လည်း မောနေတော့ ကြာကြာ စိတ်မရှည်ချင်။ အဲဒီ ကလေးယူသွားတာ အဖိုးတန် ပစ္စည်း ဘာညာ ပါတဲ့ သေတ္တာမဟုတ်၊
အခု ခေတ်စားနေတဲ့ ကိုဗစ်ပိုးတွေ သယ်လာတဲ့ ဟာလို့လည်း ရှင်းပြလိုက်ရော“ဟေ့ ရဲဇော်ဝင်း၊ သူတောင်းစားလေး။ နင့်စောက်သေတ္တာ ကြီးပါ မြန်မြန်ယူပြီး ထွက်ခဲ့” တဲ့။ မိန်းမက ကြောက်လန့်တကြား စွတ်အော်တာ။ စောစောက ကလေးဟာ မျက်ကလူးဆန်ပြာနဲ့ စောစော က သူယူပြေးတဲ့ ရေခဲပုံးကို သိုင်းကြိုးကနေ တံမြက်စည်းရိုးနဲ့ ထိုးမပြီး ထွက်လာရှာတယ်။ အို… ကြောက်တတ်လိုက်တာ။“ဟေ့… နေဦး။ မင်း ကလိမ်ကကျစ် မလုပ်နဲ့”ဟို… အသက် ၅၀ အရွယ် ဦးဗြောင်လိမ်ကြီးက ကျွန်တော့်ကို လှမ်းပြောတာ။ ကျွန်တော်က အံ့ကြီးမက ဩ သွားပြီး“ခင်ညာ … ကျွန်တော် ဘာများ ကလိမ်ကကျစ် လုပ်မိတာပါလိမ့်” ဆိုတော့ ဟိုလူကြီးက လက်ယဉ်တယ်။
ကျွန်တော့် အနားရောက်ချလာပြီး ပုခုံးကို ကိုင်ကာ ဇွတ်ထိုင်ခိုင်းတာ။“အဲဒီ သေတ္တာ ဖွင့်ပြ” တဲ့။ သူက အခုထိ ဒါကို တစ်ခုခုပါတဲ့ သေတ္တာ ထင်နေသေးတာ။ ဘေးဘီကြည့်လိုက်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ကျိုးတို့ ကျဲတဲ။ အို… မဟုတ်လည်း ကိုယ့်အထဲ ဘာပါတာ မှတ်လို့ဆို ပြီး နားအေးအောင် ဖွင့်ပြလိုက်တာ…ဟာ… အထဲမှာ ဘာမှကို မပါဘူးဗျာ။ တကယ်ကို ဘာမှ မပါတာ။ ကျွန်တော့်မျက်နှာ ပြာထွက်သွား တာ။ ဒါကို ရိပ်မိတဲ့ ဟို ဦးဗြောင်ငြင်းကြီးက“ဘယ်မလဲ ကိုဗစ်ပိုး” တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ချောလဲရောထိုင်ပေါ့ဗျာ။ အထဲက ရေခဲခြောက် ထုပ်လေးတွေ အသာကိုင်တဲ့ပြီး ပွတ်ကာသပ်ကာ“အို… ခင်ဗျားတို့ ဒီဟာကို ကျွန်တော်မလာခင် ဖွင့်လိုက်ကြသေးလား။
သွားပါပြီ။ ဒီအထုပ်လေးတွေဟာ ကိုဗစ်တွေထည့်ထားတဲ့ဟာ။ ကြည့်။ အခု အရည်ပျော်စ ပြုနေပြီ။ သွားပါပြီ။ သွားပါပြီ” နဲ့ ညည်းကြော က်ကြီး လုပ်ပြလိုက်တာ၊ ဟိုမိန်းမက ဦးဗြောင်ငြင်းကြီးကို ထကလော်တုပ်ပါလေရော။“ကို သိန်းဦး၊ သူတောင်းစားကြီး။ တော် တော်တော် ရီးရှည်ပါလား။ သူ့ ပစ္စည်းသူ မြန်မြန် ပြန်ပေးလိုက်” တဲ့။ သူတို့ လင်မယား ပီယဝါစာ ချစ်ဖွယ်သော စကားတွေနဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ် ယောက် ကျီစယ်နေကြတုန်း ကျွန်တော်လည်း ရေခဲပုံး အလွတ်ကြီးကို စလွယ်သိုင်းကာ ကားရှိရာ ပြေးရပြန်ပါတော့တယ်။ ဘာကြောင့် ပြေးရပြန်ပါသလဲ။ ဒီအဖြေကို ပေးရရင် အခု ကျွန်တော် မရမက လိုက်ယူထားတဲ့ ရေခဲပုံးထဲမှာ။
ဘာကြောင့် တို့ဖတ်ဘူးတွေ မပါတော့ပါသလဲ လို့ တွေးရမယ်ဗျ။ ဘယ်ပါမလဲဗျ။ ကျွန်တော် တိုင်းရုံးကနေ ရေခဲပုံးနှစ်ပုံး ထုတ်ခဲ့တာ။ တစ် ပုံးမှာ တို့ဖတ်ဘူးတွေပါတယ်။ တစ်ပုံးမှာ မပါဘူး။ စောစောက ကားတန်းထဲ ညပ်မိနေတုန်း ဟို ‘မအိမ်လုံး’ လေး ယူပြေးတာက ပုံးအလွတ် ကြီးဗျ။ ကျွန်တော်က ဗြုန်းခနဲ့ဆို သူယူပြေးတော့ အဲဒါ မတွေးအားဘဲ ပြေးလိုက်ခဲ့တာ။ ဆိုတော့ကာ ကားပေါ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ပုံးများ၊ ကျွန် တော် အခု ဒီလိုလာနေတုန်း တစ်ယောက်ယောက်က ‘ဘုံး’ သွားရင် သေပြီ။ ဟို ရခိုင်မနဲ့တင် ကျွန်တော်သေပြီ။ အို… ခလေးမလေးတွေရဲ့ အမေကို ကျွန်တော် ကြောက်တယ်။ ဒီတော့လည်း ပြေးပေဦးတော့ တစ်ခေါက်။
အဲဒါ ကားဆီ ရောက်ရောက်ချင်း ကြိုဆိုနေကြတာက စည်ပင်သာယာတွေပါ။ သူတို့က မရပ်ရမယ့် နေရာမှာ ကားရပ်ထားခဲ့လို့ဆိုပြီး ကျွန် တော့်ကားကို ဘီးသော့ခတ်ပြီးကြပြီ။ အီ။“တကယ်တော့ကွာ… ဒီရေခဲပုံးနောက် လိုက်ရင်း….”ကျွန်တော် ဘယ်လို ရှင်းပြပြ မရပါဘူး။ “ကျွန်တော်တို့လည်း အဖွဲ့နဲ့မို့ နားလည်ပေးပါ” တဲ့။ ဟုတ်တယ်။ သူတို့ ကားဖမ်းလာတဲ့ အဖွဲ့ဟာ ရှစ်ယောက်တိတိ ရှိတယ်။ သူတို့ နား လည်ခိုင်းတာကို ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းချင်းပဲ။ ညှိလိုက်ရင် တစ်သောင်းခွဲလောက်နဲ့ ပြတ်မှာပဲ။ အဲ…။ ဒီမှာ ဘာမဟုတ်တဲ့ သောက်ပိုအတွေးက ဝင်လာပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဒရာမာတွေ ထချိုးတာ။
အို… ငါက ကိုဗစ်အတွက် အလုပ်လုပ်ပြီး ပြန်လာရတာ။ သွားတာလာတာ ဘာလမ်းစရိတ်မှလည်း ဘယ်သူကမှ ပေးတာမဟုတ်။ ကိုယ့် ယဉ်ကိုယ့်ကားနဲ့ ကိုယ်ဆီကိုယ်ထည့်ပြီး အိတ်စိုက်လုပ်နေရတာ။ … ရီးမှ တစ်သောင်းခွဲ အကုန်မခံနိုင်ဘူးကွာ ဆိုတဲ့ပြီးစစ်အစိုးရ ခေတ်က နည်းပေါ့ဗျာ။ ဟီးဟီး။ ကျွန်တော့်အသိ စည်ပင်သာယာက ‘အစ်ကိုကြီး’ တစ်ယောက်ဆီ ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ အို… ကိုအောင်မျိုးလား။ ချက်ချင်းပဲ။ အဲဒီကောင်တွေ ဖုန်းပေးလိုက် ကိုအောင်မျိုးတဲ့။ ဟဲဟဲ။ ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ ဆိုပြီး ဖုန်းကို စပီကာဖွင့် ပေးပြောလိုက်တာ အဲဒါ ငါ့အသိ စာရေးဆရာပါကွာ၊ သူဆိုတာ ဓာတ်ခွဲမှူး။ အခုက ကိုဗစ် အတွက် ဆွက်ယူပြီး ပြန်လာတာ၊
မင်းတို့က ကူညီပေးလိုက်ပါ ဘာညာပေါ့ဗျာ။ အာဟာ… အာဟာ။ ခဏနေတော့မှ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းပြန်ပေးဖို့ ပြောပြီး“ကိုအောင်မျိုး စပီ ကာပိတ်လိုက်ဦး” တဲ့။ ကျွန်တော်က ပိတ်ပြီးပြီလို့ ပြောတော့“အဆင်ပြေမှာပါ ကိုအောင်မျိုး။ ကျွန်တော် ပြောပေးထားတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ကောင်လေးတွေ ကျေနပ်အောင် ကိုအောင်မျိုးက မုန့်ဖိုးလေးဘာလေး နည်းနည်းစီတော့ ပေးခဲ့လိုက်ပါဦး” တဲ့။စာဖတ်သူခင်ဗျာ။ ပျော်စ ရာကြီးနော်။ ကျွန်တော်က လူလည်ကျလိုက်ရတယ်လို့ ထင်တယ် မဟုတ်လား။ တကယ့်တကယ်မှာ သူ့ဆီက ဖုန်းချပြီးပြီးချင်း “ကိန်” ခနဲ့ မအော်မိအောင် မနည်းကြီး နေလိုက်ရတာ ဒီက မောင်အောင်မျိုးလေး ရယ်ပါ။
ကျွန်တော်က သူတို့ အထက်လူကြီးရဲ့ သူငယ်ချင်း။ အင်း။ အဲဒီလိုကောင်က ချက်ချင်းလက်ငင်း ကလေးလေးတွေ ဖြစ်သွားတဲ့ စည်ပင်လေး တွေကို စိတ်ကူးနဲ့ မုန့်ဖိုးပေးကြည့်လိုက်ပါဗျာ။ တစ်ယောက်ကို နှစ်ထောင် သုံးထောင်ပေးလိုက်လို့ ကောင်းပါမလား။ အားပါးပါး။ အဲဒါ ငါး ရှစ်လီ လေးဆယ်နဲ့ ရှစ်ယောက်စာ လေးသောင်း‌တောင်မှ တောင်းတောင်းပန်ပန်ပါခင်ညာ။
ဆိုတော့ကြ ပွောခငျြတာက ဒီက ကိုအောငျမြိုးကို နှယျနှယျရရ မမှတျကွပါနဲ့။ တကယျ့ ဖိုကျတာကွီးရယျပါ။ ဒီနပေဲ့ကွညျ့။ ကှာရနျတငျးထဲ မှာ ဖိုကျတယျ။ ကြူးတဲလေးထဲမှာ ဖိုကျတယျ။ စညျပငျသာယာနဲ့ ဖိုကျတယျ။ ဖိုကျ ဖိုကျ ဖိုကျ။အဲ… အနိုငျအရှုံး စ ကားတော့ မပွောနဲ့ပေါ့။ အဲဒါ အားကစားသမား စိတျဓာတျမရှိရာကတြယျ။ဖိုကျတာမြိုး.. အောငျမြိုး ကို နှယျနှယျရရ မမှတျကွ ပါနဲ့။ပွောရရငျ မနကျ အစောကွီး တိုငျးကနျြးမာရေးရုံး ကို ရောကျ နတောက စရမှာပဲ။ မနေ့ ကတညျးက ရခိုငျပွနျ ကိုဗဈသံသယလူတှကေို ‘တို့ဖတျ’ ယူဖို့ တာဝနျပေးခံထား ရလို့ ဒီမနကျတော့ စောစောထ ကားမောငျးခဲ့ကာ၊ တိုငျးရုံးထဲရောကျနတေယျ။
ကိုဗဈတို့ဖတျတှေ ထညျ့ရတဲ့ တို့ဖတျဘူးလေးတှေ ကို ‘ဗီတီအမျ’ လို့ချေါတယျ။ viral transport media ပေါ့။ နှာခေါငျးထဲ အာခေါငျထဲ ဂှမျးတံလေးတှနေဲ့ ထိုးပွီးရငျ အဲဒီဘူးလေးထဲ ထညျ့ပိတျ ပို့ရတာ။ လကျသူကွှယျလောကျ ရှိမယျ့ ပလတျစတဈဘူး အရှညျလေးတှေ။ နောကျတဈခုက ဗကျဆငျး ကယျရီယာ ချေါတဲ့ဟာ။ ဗမာလို ရခေဲပုံး ဆိုပါစို့။ သို့ပမေယျ့ သူက အပိတျအဖှငျ့မှာ ကလဈလေး တှေ ပါတယျ။ အဖုံးကို သိုငျးကွိုးနဲ့ ဘာနဲ့ သခြော အကအြန ပိတျထားရငျ တျောရုံအကငျြ့မရှိတဲ့လူ ဗွုနျးခနဲ့ မဖှငျ့တတျဘူး။ ပွီးတော့ သူ့ကို ကွညျ့လိုကျ ရငျ ရခေဲပုံးဆိုတာထကျ သတ်ေတာနဲ့ ပိုတူတယျ။
အထဲမှာ ရခေဲခွောကျချေါတဲ့ ပလတျစတဈဘူးနဲ့ အအေးခံ ထားတဲ့ ရခေဲတောငျ့ လေးတှေ ပါပါတယျ။ကြှနျတျောတိုငျး ရုံးကို အစောကွီး ရောကျနတောက တို့ဖတျယူဖို့အတှကျ အဲဒီ ပစ်စညျးတှေ လာထုတျတာ။ နောကျလညျး ယူရဦးမယျ့အတူတူ ပိုထုတျခဲ့မယျ တှေးတာ။ တို့ ဖတျဘူးက လိုသလောကျရပမေယျ့ ရခေဲပုံးကတော့ အခုသုံးဖို့ အပွငျ၊ နောကျတဈပုံးပဲ အပိုရတယျ။ ဒီတော့လညျး နှဈပုံးပေါ့။အဲဒါ ရတာ လေးတှထေုတျ၊ ကြှနျတေျာ့ ခှေးဘီလူးကားလေး ပျေါတငျပွီး တို့ဖတျယူရမယျ့ ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံကို မွနျးခဲ့တယျပေါ့။ ဒီအထိက ခြော နတောပဲ။ဟိုရောကျတော့ တာဝနျကြ ဆရာမတှနေဲ့ တို့ဖတျယူဖို့ ပွငျဟယျ ဆငျဟယျပေါ့။
ကြှနျတျောတို့ အလုပျလုပျကွပုံက ဒီလို။ တို့ဖတျဘူးလေးတှပေျေါ နာမညျ၊ အသကျ ရေးကပျပွီးတော့ တို့ဖတျ အယူခံရမယျ့ အဖှဲ့တှထေဲ တဈယောကျခငျြး နာမညျချေါ ဝလေိုကျတယျ။“ကိုယျ့နာမညျပါတဲ့ ကိုယျ့ဘူးလေး ကိုယျ ကိုငျထားပွီး တနျးစီကွပါ၊ ကိုယျ့ဘူး ကိုယျ ကိုငျ ထားပါနျော။ အခငျြးခငျြး ဘူးခငျြးမလဲပါနဲ့။ ခွောကျပစေီ ခှာနပေါ” ဘာညာပေါ့ဗြာ။ အဲဒီလိုတှေ မှာတမျးခွှပွေီးတော့ကြ ကြှနျတျောက ပီပီ အီးချေါတဲ့ အကာအကှယျဝတျစုံ ဝတျတဲ့ပွီး၊ တဈယောကျခငျြးချေါကာ တို့ဖတျယူတော့တာပဲ။ကလေးတှေ ဘာတှေ တို့ဖတျယူတဲ့ပုံ ဖေ့ ဘုတျကကွညျ့ပွီး ဒရာမာတှေ ထထခြိုးနတေဲ့ လူတှမွေငျရငျ ကြှနျတျောက တအားငိုခငျြတာပဲ။
ဘာလို့လဲဆို တကယျ့မွပွေငျမှာ ကလေးနဲ့တှလေို့ ဇာတျနာရတာက တို့ဖတျယူတဲ့ ဓာတျခှဲမှူးပါခငျဗြာ။အခုပဲ ကွညျ့လေ။ လူလေးငါး ယောကျ ယူပွီးတော့ အလှညျ့ကတြာ ကလေးလေး။ သုံးနှဈသားလောကျ ရှိမှာပေါ့။ ကြှနျတေျာ့ မွငျကတညျးက ဒီကောငျက ငိုတာပဲ။ ကြှနျ တျောလညျး သနားလို့ တဈခှနျးစ နှဈခှနျးစ ဝငျခြော့ပါသေးတယျ။ အဲဒါ ကလေးအမကေ“ဆရာ့ကို သူက လူလို့ မထငျပွီး တအားငိုနတော ဆရာ။ ဆရာဆီက စကားသံကွားလေ ပိုဆိုးလပေဲ” တဲ့။ ဪ ပီပီအီးဝတျထားတဲ့ ငါ့ပုံဟာ သတ်တဝါကွီး တဈကောငျလို အငျမတိအငျမတနျ ခနျ့ညားလို့ ဖွဈမှာပဲလို့၊ ပီတိမကျြရညျလေးတှပေါ လဲ့လာမိလိုကျပါသေးတယျ။
ပွီးတော့ နောကျတဈယောကျက ရခိုငျမ။ ၁၆ နှဈအရှယျ သမီးလေးတဈယောကျရယျ၊ ၈ နှဈလောကျဟာလေးရယျ၊ သမီးနှဈယောကျ ပါ တယျ။ ခပျကဲကဲ ကလေးမိခငျတို့ရဲ့ အထာပေါ့ခငျဗြာ။ သမီးရယျ ဘာရယျ ပွာဆာနတောပဲ။ ကြှနျတျောက သူတို့ရဲ့ ကွောကျစိတျကို နား လညျပေးပွီး ဖွညျးဖွညျးညငျသာ ယူပေးပါတယျ။ ဒါနဲ့တောငျ ၈ နှဈကောငျမလေးက ကမ်ဘာပကျြ အောငျ အျောသဗြ။ အ။ ပီပီအီးထဲက တောငျ နားပငျးယူတယျဗြာ။သူပွီးတော့ ၁၆ နှဈသမီး ကောငျမလေး။ ဒါလေးကတော့ ရှကျတတျတဲ့ အရှယျမို့ မအျောဘူး။ သို့သျော မကျြ ရညျတောကျတောကျကြ ရှိုကျရှိုကျပွီး ငိုတာဗြာ။ ကြှနျတေျာ့မှာ သူ့ကို တို့ဖတျယူပေးနရေငျးတောငျ ရငျထဲက သနားလာမိပါတယျ ဆို။
အို။ တကယျတှေ ရငျထဲ အဲလိုဖွဈတာပါ ဆိုမှ။ သူတို့အမကွေီး ဆိုတာလညျး သမီးတှအေနားထိလာပွီး တခြော့ခြော့ပေါ့။ ပွီးတော့ကြ အ မကွေီး အလှညျ့။ ဒီမှာ ပွဿနာတကျတာပဲ။ ကြှနျတျောကလညျး ပထမ ၈ နှဈသမီးလေးတုနျးက အျောလှနျးပွီး နားငွီးလို့။ ဒုတိယ ၁၆ နှဈ မလေးကြ သနားပွီး ကိုယျပါ မကျြရညျဝဲလာလို့၊ ခပျမွနျမွနျပဲ ယူပေးလိုကျမိတာ။ အဲဒါ သူ့သမီးတှကေို ငိုအောငျလုပျတဲ့ ကြှနျတေျာ့ကို မကျြ စောငျးတခဲခဲ ဖွဈနတေဲ့ ရခိုငျမကွီးကမြှ တို့ဖတျမယူခငျ သူ့လကျထဲက တို့ဖတျဘူး ယူကွညျ့လိုကျ မိတာ၊ နာမညျက လှဲနပေါရော။ လှဲနေ တာက သူ့သမီးတဈယောကျနဲ့ တို့ဖတျဘူးခငျြး လှဲနတော။ ကဲ… မခကျကွဘူးလား။
ဒါဆို စောစောက ကလေးမနှဈယောကျထဲက တဈယောကျကို သူ့အမနောမညျပါတဲ့ ဘူးနဲ့ ယူပေးလိုကျမိတာ။ ဆိုတော့ကာ ဘယျသူ့ကို ဘယျဘူးနဲ့ ယူပေးလိုကျတာလဲ။ ဒါကိုမေးတော့ သူတို့သားအမိတှလေညျး မမှတျမိဘူး။ပီပီအီးဆိုတာက ဝတျထားရသူအတှကျ စက်ကနျ့နဲ့အ မြှ ပူတာမြိုးပါ။“ခငျဗြားတို့ဗြာ။ ဘူးတှေ အခငျြးခငျြး မလဲပါနဲ့ လို့ ကြှနျတျော အတနျတနျ မှာထားလကျြနဲ့…” ဆိုပွီး ပွောတော့ ရခိုငျမက လညျး “အို… ဘယျသိမလဲ၊ ဒီကလညျး သားအမိခငျြးတှေ မှားသှားတာပဲ” ဆိုကာ မကမြေနပျ ပှစိပှစိ။သို့သျော ဓာတျခှဲ အဖွတေို့ရဲ့ သဘော က သားအမိခငျြးလို့ မရှိပါဘူး။ ဆိုတော့ကာ မငျးတုနျးမငျးကွီးလို “မကနြေပျ တဈကပွနျစ” ပဲ။
“ကဲ… အခုယူမယျ့ အနျတီ့ဘူးကိုတော့ အနျတီမှနျး သိနတေော့ နာမညျ ပွငျကပျပေးလိုကျလို့ ရတယျ။ ဒါပမေယျ့ အနျတီ့ သမီးနှဈယောကျ တော့ ဘယျသူ့ဟာက ဘာမှနျးမသိတော့ နှဈယောကျလုံး ပွနျယူရမှာ” ဆိုတော့၊ဟို ၈ နှဈသမီးဟာဗြာ၊ အဲဒီစကား ကွားလိုကျ ကတညျးက ဗွဲခနဲ့ ဗွဲခနဲ့ အျောပွီး ငိုတာငိုတာ ဆိုတာ၊ ကှာရနျတငျးစငျတာ တဈခုလုံးက ထှကျကွညျ့ကွတယျ။မတတျနိုငျ။တဈကပွနျစ။ ပထမ အဆိုပါ အာဗွဲမလေး။ သူ့အမကေ ခြော့ဟယျ၊ (ကြှနျတေျာ့ကို စောငျးပွောသလိုလိုမြိုး) ဆဲဟယျ ဆိုဟယျ ခွောကျဟယျ နဲ့ အဆငျပွသှေားပါတယျ။ နောကျပွီးတော့ ကြှနျတျောသနားတဲ့ ၁၆ နှဈမလေး။ ခမြာ စောစောကလို ငိုရှာ တာပဲ။ ငိုလညျး တို့ဖတျတော့ ယူရတယျ။
အာခေါငျက အဆငျပွပေါတယျ။ နှာခေါငျးမှာ ပထမတဈဖကျ အပွီး နောကျဆုံး ဒုတိယတဈဖကျမှာ ကလေးမက ငိုနရေငျးမို့ မှနျလှနျးလာသ လား မသိ၊ ကြှနျတေျာ့လကျကို တအား ပုတျထုတျပဈလိုကျတာ ‘ဖွောငျး’ ခနဲ့နတောပဲ ခငျဗြာ။ ဒီမှာ လကျထဲက တို့ဖတျတံလညျး ဘယျလှငျ့ သှားမှနျးတောငျ မသိပါဘူး။ကြှနျတျောက တို့ဖတျတံ ဘယျလှငျ့သှားမှနျး မသိဘူးလို့ ရေးတယျနျော။ အို… သူ့အမကေတော့ သိတယျဗြ။ ဟိုး အဝေးကွီးက မွကွေီးပျေါ အလြားလိုကျလှဲနတေဲ့ တို့ဖတျတံလေး ပွေးကောကျတဲ့ပွီး ပေးရှာတယျ။ သို့သျော ဓာတျခှဲတို့ရဲ့ သဘောကား ထို့ သို့ မွကွေီးပျေါကပြွီးသားကွီး ပို့ပေးလို့မရပွနျ။“နောကျထပျ ထပျထိုးရမယျ ခငျဗြ” ဆိုတော့ကြ။
သူလေးတို့ မမေမေကျြနှာ ဘယျလိုဖွဈသှားမယျဆိုတာ စဉျးစားသာ ကွညျ့ပါတော့ ခငျဗြာ။အဲဒါမြိုးတှေ လူ ၃၁ ယောကျ ယူပွီးပွီဆိုတော့ ကိုအောငျမြိုးကွီး တအားပငျပနျးတယျပေါ့။ တို့ဖတျဘူးလေးတှေ စီပွီး ရခေဲပုံးထဲထညျ့၊ ပိတျပွုပွီးတော့ ပီပီအီးဘာညာ ခြှတျကာ အေးမွ ခွငျးရဲ့ အရသာကို ကျောရဈဒါတလြောကျ လမျးလြှောကျရငျး ခံစားတယျပေါ့။အောငျမယျမယျ။ လူနာခနျးတှရှေေ့ ဖွတျတော့ မှနျခနျးထဲက နေ စောစောက ဂှမျးတံနဲ့ သုံးခါအထိုးခံလိုကျရတဲ့ ၁၆ နှဈမလေးက သိသိသာသာ မကျြစောငျးထိုးပွတယျ။ သို့သျော သူဟာ နဂါးမလေးဖွဈ ခဲ့ရငျတောငျ အဲဒီ ထိုးလိုကျတဲ့ မကျြစောငျးဟာ၊ ဒီက ကိုအောငျမြိုးကွီးရဲ့ တိုငျးပွညျနဲ့လူမြိုး အပါအဝငျ။
တိုငျးရငျးသား ရခိုငျတှအေပျေါ ထားတဲ့ မတ်ေတာအဟုနျကို ခှငျးပွီး ထှငျးနိုငျလိမျ့မယျ မထငျမိပေါငျ။ ဟီဟီ။ အဲဒါ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျဗြာ က လေးမက ကိုယျ့ကို မကျြစောငျးလှမျးအထိုး၊ ကြှနျတေျာ့ ဘယျဘကျမကျြစိထဲ ပိုးကောငျလေး ဆတျခနဲ့ဝငျ ထငျပါရဲ့၊ ဖတျြခနဲ့ မကျြလုံးတဈ ဖတျ မှိတျလိုကျမိတာကို… ဟို အမလေုပျတဲ့ ရခိုငျမက မွငျဖွဈအောငျ မွငျပွီး ရခှေကျကို ဆောငျ့ခတြယျ။ အဲ… ဒါကွီးကတော့ ဘယျမတ်ေတာ အဟုနျနဲ့မှ တားနိုငျမယျမထငျလို့ မွနျမွနျလေးပဲ လဈခဲ့ပါတော့တယျ။ကြှနျတျော အခု ရေးပွတဲ့ ဇီဝိတကှာရနျတငျး စငျတာဟာ ကနျတျော ကွီးမှာပါ။ မန်တလေးမှာ ကိုဗဈတှေ စဈတဲ့ဌာနက ၃၅ လမျးမှာ။
ဒီတော့လညျး ကြှနျတေျာ့မှာ တို့ဖတျဘူးတှေ ထညျ့ထားတဲ့ စောစောက ရခေဲပုံးကွီး ခှေးဘီလူးကားလေးနောကျတငျကာ ကနျတျောကွီး လမျးအတိုငျး အရှတေ့ကျခဲ့တယျပေါ့။ အဲဒါ မွို့ဟောငျးဈေး လမျးဆုံအရောကျမှာ ကားတနျးထဲ ပိတျမိနပွေီး လမျးနညျးနညျးကွပျလို့ မှေး မောငျးရတယျ မို့လား။ အဲလို နတေုနျး စိတျကူးယဉျတာပေါ့။တကယျဆို ငါ သူတို့လေးတှကေို ဒီ့ထကျခြိုခြိုသာသာ ဆကျဆံခဲ့သငျ့တာ” ဘာ ညာ ပေါ့ဗြာ။ အတှေးတှေ ပှားနတော။ “တကယျလို့ အစိုးရကသာ မပူတဲ့ ပီပီအီးတှေ တီထှငျပေးမယျဆို ငါဒီထကျ ခြိုခြိုသာသာ ပွောဆို နိုငျမှာပဲ” အစိုးရကိုလညျး နာနာဆဲပေါ့။ ဟီးဟီး။ အဲလိုတှေ တှေးနတေုနျး ကားနောကျခနျးဆီက ညိမျ့ခနဲ့ တဈခကျြခံစားလိုကျရပွီး။
ဘေးကနေ တဈယောကျယောကျက လှမျးအျောတာ“ယူသှားပွီ၊ ယူသှားပွီ၊ ခငျဗြား ဟာကွီး ယူသှားပွီ” တဲ့။ဟ… သောကျလခှေး။ ခှေးဘီ လူး ကားနောကျခနျးမှာ တငျထား တဲ့ ကိုဗဈရခေဲပုံးကွီး လူယူပွေးတာဗြား။ အား။ ဘာပွောကောငျးမလဲ။ ကြှနျတျောလညျး ကားပျေါက ဆငျးပွီး ဒုနျးစိုငျးလိုကျတော့တာပေါ့။စိတျဟာ လကျဖဈြတတှတျအတှငျး ကုဋဘေယျနှသနျးဆိုလား ဖွဈတယျဆိုရဲ့။ ဒီ ရခေဲပုံးကွီး ပွနျမ ရရငျ ၃၁ ယောကျလုံး အသဈ ပွနျယူရမှာ။ စောစောကမှ တို့ဖတျအယူခံထားရတဲ့ လူအုပျကွီးဟာ နောကျတဈခါသာဆို…. အို… ငါတော့ သပွေီ။ တခွားလူတှအေသာထား ဟို ရခိုငျမ လုပျတာနဲ့ ပဲ ငါသမှော။
ငါမသခေငျြသေး။ တျောကွာ … ရခိုငျမလေးငို…. အဲ …ဟုတျပေါငျ။ လိုကျဟ အောငျမြိုးရ။ မငျး ပွဿနာ မတကျခငျြရငျ အဲဒီ ရဲခဲပုံးကွီး မရ ရအောငျ လိုကျယူဟ ပေါ့ဗြာ။ယူပွေးတာကလညျး ကလေးသာသာ ကောငျလေးဗြ။ မအပေေးလေးက ကိုဗဈပုံးကို ဘာထငျနတေယျ မသိ။ ကလေးသာဆိုတယျ အပွေးက ခနျြပီယံလားမသိ။ သငျးကိုတျောတျောနဲ့ မမိ။ အကွိုအကွားတှေ အကုနျလြှောကျပွေးပွီးတဲ့ အဆုံးကမြှ အိမျလေးတဈလုံးထဲ ဝငျသှားတယျ။ ကြှနျတျောလဲ ဟောဟဲခတျနပွေီ။“စောစောက ကလေးယူပွေးသှားတဲ့ ပုံးလေး ကြှနျတျောပွနျလိုခငျြ လို့ပါ”အိမျရှကေ့ပွငျမှာ ထဘီရငျရှားနဲ့ မိနျးမ၊ ဘာတှလေညျး မသိ၊ ကုနျးလုပျနရောက မလှုပျပါ။
တျောတျော ကွာကွာ ဇှဲခတျမေးတော့မှ..“ဘယျက ကလေးလဲ။ ဒီအိမျမှာ ဘာကလေးမှ မရှိဘူး” တဲ့။ အထဲက အသကျ ၅၀ လောကျ လူကွီး တဈယောကျ ထှကျလာပွီး ဗွောငျလိမျတာ။ ဗိုလျခြုပျခငျညှနျ့ ခတျေက နှားခိုးတဲ့ ရှာတဈရှာ ရှိဆိုလား။ အဲဒီရှာက နှားခိုးပွီး တဈရှာလုံး မြှ စားကွတာတဲ့။ ဒါပတေဲ့ ရှာထဲက ကွိုကျတဲ့ ကလေး တဈယောကျယောကျ ကို “မငျးတို့အိမျ ဘာခကျြလဲ” မေး၊ “ဂဂြှနျးရှကျကွျော” လို့ခညျြး ဖွတောဆိုပဲ။ အခုလညျး ဒီလူတှကေ အဲဒီ “ဂဂြှနျးရှကျကွျော” ဆိုတဲ့ အကှကျတှေ။ကြှနျတျောလညျး မောနတေော့ ကွာကွာ စိတျမရှညျခငျြ။ အဲဒီ ကလေးယူသှားတာ အဖိုးတနျ ပစ်စညျး ဘာညာ ပါတဲ့ သတ်ေတာမဟုတျ၊
အခု ခတျေစားနတေဲ့ ကိုဗဈပိုးတှေ သယျလာတဲ့ ဟာလို့လညျး ရှငျးပွလိုကျရော“ဟေ့ ရဲဇျောဝငျး၊ သူတောငျးစားလေး။ နငျ့စောကျသတ်ေတာ ကွီးပါ မွနျမွနျယူပွီး ထှကျခဲ့” တဲ့။ မိနျးမက ကွောကျလနျ့တကွား စှတျအျောတာ။ စောစောက ကလေးဟာ မကျြကလူးဆနျပွာနဲ့ စောစော က သူယူပွေးတဲ့ ရခေဲပုံးကို သိုငျးကွိုးကနေ တံမွကျစညျးရိုးနဲ့ ထိုးမပွီး ထှကျလာရှာတယျ။ အို… ကွောကျတတျလိုကျတာ။“ဟေ့… နဦေး။ မငျး ကလိမျကကဈြ မလုပျနဲ့”ဟို… အသကျ ၅၀ အရှယျ ဦးဗွောငျလိမျကွီးက ကြှနျတေျာ့ကို လှမျးပွောတာ။ ကြှနျတျောက အံ့ကွီးမက ဩ သှားပွီး“ခငျညာ … ကြှနျတျော ဘာမြား ကလိမျကကဈြ လုပျမိတာပါလိမျ့” ဆိုတော့ ဟိုလူကွီးက လကျယဉျတယျ။
ကြှနျတေျာ့ အနားရောကျခလြာပွီး ပုခုံးကို ကိုငျကာ ဇှတျထိုငျခိုငျးတာ။“အဲဒီ သတ်ေတာ ဖှငျ့ပွ” တဲ့။ သူက အခုထိ ဒါကို တဈခုခုပါတဲ့ သတ်ေတာ ထငျနသေေးတာ။ ဘေးဘီကွညျ့လိုကျတော့ ပတျဝနျးကငျြကလညျး ကြိုးတို့ ကြဲတဲ။ အို… မဟုတျလညျး ကိုယျ့အထဲ ဘာပါတာ မှတျလို့ဆို ပွီး နားအေးအောငျ ဖှငျ့ပွလိုကျတာ…ဟာ… အထဲမှာ ဘာမှကို မပါဘူးဗြာ။ တကယျကို ဘာမှ မပါတာ။ ကြှနျတေျာ့မကျြနှာ ပွာထှကျသှား တာ။ ဒါကို ရိပျမိတဲ့ ဟို ဦးဗွောငျငွငျးကွီးက“ဘယျမလဲ ကိုဗဈပိုး” တဲ့။ ကြှနျတျောလညျး ခြောလဲရောထိုငျပေါ့ဗြာ။ အထဲက ရခေဲခွောကျ ထုပျလေးတှေ အသာကိုငျတဲ့ပွီး ပှတျကာသပျကာ“အို… ခငျဗြားတို့ ဒီဟာကို ကြှနျတျောမလာခငျ ဖှငျ့လိုကျကွသေးလား။
သှားပါပွီ။ ဒီအထုပျလေးတှဟော ကိုဗဈတှထေညျ့ထားတဲ့ဟာ။ ကွညျ့။ အခု အရညျပြျောစ ပွုနပွေီ။ သှားပါပွီ။ သှားပါပွီ” နဲ့ ညညျးကွော ကျကွီး လုပျပွလိုကျတာ၊ ဟိုမိနျးမက ဦးဗွောငျငွငျးကွီးကို ထကလျောတုပျပါလရေော။“ကို သိနျးဦး၊ သူတောငျးစားကွီး။ တျော တျောတျော ရီးရှညျပါလား။ သူ့ ပစ်စညျးသူ မွနျမွနျ ပွနျပေးလိုကျ” တဲ့။ သူတို့ လငျမယား ပီယဝါစာ ခဈြဖှယျသော စကားတှနေဲ့ တဈယောကျကို တဈ ယောကျ ကြီစယျနကွေတုနျး ကြှနျတျောလညျး ရခေဲပုံး အလှတျကွီးကို စလှယျသိုငျးကာ ကားရှိရာ ပွေးရပွနျပါတော့တယျ။ ဘာကွောငျ့ ပွေးရပွနျပါသလဲ။ ဒီအဖွကေို ပေးရရငျ အခု ကြှနျတျော မရမက လိုကျယူထားတဲ့ ရခေဲပုံးထဲမှာ။
ဘာကွောငျ့ တို့ဖတျဘူးတှေ မပါတော့ပါသလဲ လို့ တှေးရမယျဗြ။ ဘယျပါမလဲဗြ။ ကြှနျတျော တိုငျးရုံးကနေ ရခေဲပုံးနှဈပုံး ထုတျခဲ့တာ။ တဈ ပုံးမှာ တို့ဖတျဘူးတှပေါတယျ။ တဈပုံးမှာ မပါဘူး။ စောစောက ကားတနျးထဲ ညပျမိနတေုနျး ဟို ‘မအိမျလုံး’ လေး ယူပွေးတာက ပုံးအလှတျ ကွီးဗြ။ ကြှနျတျောက ဗွုနျးခနဲ့ဆို သူယူပွေးတော့ အဲဒါ မတှေးအားဘဲ ပွေးလိုကျခဲ့တာ။ ဆိုတော့ကာ ကားပျေါမှာ ကနျြခဲ့တဲ့ ပုံးမြား၊ ကြှနျ တျော အခု ဒီလိုလာနတေုနျး တဈယောကျယောကျက ‘ဘုံး’ သှားရငျ သပွေီ။ ဟို ရခိုငျမနဲ့တငျ ကြှနျတျောသပွေီ။ အို… ခလေးမလေးတှရေဲ့ အမကေို ကြှနျတျော ကွောကျတယျ။ ဒီတော့လညျး ပွေးပဦေးတော့ တဈခေါကျ။
အဲဒါ ကားဆီ ရောကျရောကျခငျြး ကွိုဆိုနကွေတာက စညျပငျသာယာတှပေါ။ သူတို့က မရပျရမယျ့ နရောမှာ ကားရပျထားခဲ့လို့ဆိုပွီး ကြှနျ တေျာ့ကားကို ဘီးသော့ခတျပွီးကွပွီ။ အီ။“တကယျတော့ကှာ… ဒီရခေဲပုံးနောကျ လိုကျရငျး….”ကြှနျတျော ဘယျလို ရှငျးပွပွ မရပါဘူး။ “ကြှနျတျောတို့လညျး အဖှဲ့နဲ့မို့ နားလညျပေးပါ” တဲ့။ ဟုတျတယျ။ သူတို့ ကားဖမျးလာတဲ့ အဖှဲ့ဟာ ရှဈယောကျတိတိ ရှိတယျ။ သူတို့ နား လညျခိုငျးတာကို ကြှနျတျော နားလညျပါတယျ။ ဝနျထမျးခငျြးပဲ။ ညှိလိုကျရငျ တဈသောငျးခှဲလောကျနဲ့ ပွတျမှာပဲ။ အဲ…။ ဒီမှာ ဘာမဟုတျတဲ့ သောကျပိုအတှေးက ဝငျလာပွီး ကိုယျ့ဟာကိုယျ ဒရာမာတှေ ထခြိုးတာ။
အို… ငါက ကိုဗဈအတှကျ အလုပျလုပျပွီး ပွနျလာရတာ။ သှားတာလာတာ ဘာလမျးစရိတျမှလညျး ဘယျသူကမှ ပေးတာမဟုတျ။ ကိုယျ့ ယဉျကိုယျ့ကားနဲ့ ကိုယျဆီကိုယျထညျ့ပွီး အိတျစိုကျလုပျနရေတာ။ … ရီးမှ တဈသောငျးခှဲ အကုနျမခံနိုငျဘူးကှာ ဆိုတဲ့ပွီးစဈအစိုးရ ခတျေက နညျးပေါ့ဗြာ။ ဟီးဟီး။ ကြှနျတေျာ့အသိ စညျပငျသာယာက ‘အဈကိုကွီး’ တဈယောကျဆီ ဖုနျးဆကျလိုကျတယျ။ အို… ကိုအောငျမြိုးလား။ ခကျြခငျြးပဲ။ အဲဒီကောငျတှေ ဖုနျးပေးလိုကျ ကိုအောငျမြိုးတဲ့။ ဟဲဟဲ။ ဘာတတျနိုငျသေးလဲ ဆိုပွီး ဖုနျးကို စပီကာဖှငျ့ ပေးပွောလိုကျတာ အဲဒါ ငါ့အသိ စာရေးဆရာပါကှာ၊ သူဆိုတာ ဓာတျခှဲမှူး။ အခုက ကိုဗဈ အတှကျ ဆှကျယူပွီး ပွနျလာတာ၊
မငျးတို့က ကူညီပေးလိုကျပါ ဘာညာပေါ့ဗြာ။ အာဟာ… အာဟာ။ ခဏနတေော့မှ ကြှနျတေျာ့ဆီ ဖုနျးပွနျပေးဖို့ ပွောပွီး“ကိုအောငျမြိုး စပီ ကာပိတျလိုကျဦး” တဲ့။ ကြှနျတျောက ပိတျပွီးပွီလို့ ပွောတော့“အဆငျပွမှောပါ ကိုအောငျမြိုး။ ကြှနျတျော ပွောပေးထားတယျတဲ့။ ဒါပမေယျ့ ကောငျလေးတှေ ကနြေပျအောငျ ကိုအောငျမြိုးက မုနျ့ဖိုးလေးဘာလေး နညျးနညျးစီတော့ ပေးခဲ့လိုကျပါဦး” တဲ့။စာဖတျသူခငျဗြာ။ ပြျောစ ရာကွီးနျော။ ကြှနျတျောက လူလညျကလြိုကျရတယျလို့ ထငျတယျ မဟုတျလား။ တကယျ့တကယျမှာ သူ့ဆီက ဖုနျးခပြွီးပွီးခငျြး “ကိနျ” ခနဲ့ မအျောမိအောငျ မနညျးကွီး နလေိုကျရတာ ဒီက မောငျအောငျမြိုးလေး ရယျပါ။
ကြှနျတျောက သူတို့ အထကျလူကွီးရဲ့ သူငယျခငျြး။ အငျး။ အဲဒီလိုကောငျက ခကျြခငျြးလကျငငျး ကလေးလေးတှေ ဖွဈသှားတဲ့ စညျပငျလေး တှကေို စိတျကူးနဲ့ မုနျ့ဖိုးပေးကွညျ့လိုကျပါဗြာ။ တဈယောကျကို နှဈထောငျ သုံးထောငျပေးလိုကျလို့ ကောငျးပါမလား။ အားပါးပါး။ အဲဒါ ငါး ရှဈလီ လေးဆယျနဲ့ ရှဈယောကျစာ လေးသောငျး‌တောငျမှ တောငျးတောငျးပနျပနျပါခငျညာ။